Ule Ule - Ningbo Rumotek Magnetic Technology Co., Ltd.
NA-EME ỌR T ỌREC
Kwa ụbọchị, RUMOTEK na-arụ ọrụ na ntinye na ibu ọrụ nke ịlele ngwaahịa dị elu.
A na-eji nju na-adịgide adịgide n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe niile. Ndị ahịa anyị sitere na robotics, pharmaceutical, automobile and aerospace ụlọ ọrụ nwere nlezianya chọrọ nke a ga-ezute na njikwa ogo dị elu. Anyị kwesịrị ịnye akụkụ nchekwa, chọrọ nnabata na njirisi siri ike na ndokwa. Ezigbo mma bụ nsonaazụ nke atụmatụ zuru ezu na itinye ya n'ọrụ. Anyị emejuputa atumatu usoro di nma dika ntuziaka nke ọkọlọtọ mba ụwa EN ISO 9001: 2008.
Ofụri Esịt achịkwa zuo nke ngwaọrụ, suppliers nlezianya ahọrọ n'ihi na ha mma, na obosara-sitere na chemical, nke anụ ahụ na oru ndenye ego hụ na top-edu isi ihe na-eji. A na-eji usoro sọftụwia kachasị ọhụrụ arụ ọrụ yana achọpụta ihe eji eme ihe. Nyocha nke ngwaahịa anyị na-apụ na-eme dịka ọkọlọtọ DIN 40 080.
Anyị nwere ndị ọrụ ruru eru nke ukwuu na ngalaba R & D pụrụ iche nke, ekele maka nlekota na nyocha akụrụngwa, nwere ike ịnweta ọtụtụ ozi, njirimara, akụkụ na magnetik maka ngwaahịa anyị.
Iji nyere gị aka inweta nghọta ka mma banyere mkpụrụ okwu ahụ na ngalaba ahụ, na nkebi a anyị na-enye gị ozi kwekọrọ na ihe magnetik dị iche iche, ọdịiche geometrical, ndidi, ikike ndị na-agbaso, nghazi na magnetization na magnet, yana nnukwu akwụkwọ ọkọwa okwu nke okwu na nkọwapụta.
The laser granulometer na-enye kpọmkwem ọka size nkesa akụkụ nke ihe ahụ, dị ka ngwaọrụ, ozu na seramiiki glazes. Ihe ọ bụla na-ewe sekọnd ole na ole ma kpughee ihe niile dị na oke dị n'etiti 0.1 na 1000 micron.
Ìhè bụ akpa ikuku. Mgbe ìhè zutere ihe ndị dị n'ụzọ nke njem, mmekorita dị n'etiti ọkụ na ihe ga-eme ka ndị mmadụ ghara inwe akụkụ nke ìhè ahụ, nke a na-akpọ ịgbasa ọkụ. Nnukwu nkesa a na-achụsasị bụ, mkpụrụ akụkụ ga-pere mpe, nke pekarịsịrị, akụkụ ahụ ga-ebu ibu. Ngwunye ihe nyocha ahụ ga-enyocha nkesa mkpụrụ ahụ dị ka agwa anụ ahụ nke ọkụ si dị.
Igwe Helmholtz nwere agwakọta abụọ, nke ọ bụla nwere ọnụọgụ nke amaara ama, na-etinye ya na ebe dị anya site na magnet na-anwale. Mgbe a na-etinye magnet na-adịgide adịgide nke olu mara mma n'etiti eriri abụọ ahụ, njupụta magnetik nke magnet na-ewepụta ihe dị ugbu a na ntanetị nke nwere ike ịdaba na mmụba nke ntụgharị (Maxwells) dabere na mwepụ na ọnụọgụ nke ntụgharị. Site na ịtụ ngbanwe nke magnet, nju ndọta, njupụta nke permeance, na nloghachi nke ndọta, anyị nwere ike ịchọpụta ụkpụrụ dịka Br, Hc, (BH) max na nghazi nghazi.
AKWKWỌ FLUX DENSITY
Ego nke magnetik na-agbanwe site na mpaghara ebe ejiri n'akụkụ ụzọ nke magnetic flux. A na-akpọkwa Ọdụdọ Magnetic.
A tụrụ nke ike nke a magnetik na a nyere mgbe, gosiri site n'ike kwa unit lengthon a eduzi ebu unit ugbu a na mgbe.
Ngwaọrụ na-etinye gaussmita iji tụọ njupụta ntụgharị nke magnet na-adịgide adịgide n'ebe dị anya. Dịka, a na-eme nha ahụ na elu ndọta, ma ọ bụ n'ebe dị anya nke a ga-eji ntụgharị ahụ na ndọta magnet. Nnwale njupụta nke Flux na-egosi na ihe ndọta ejiri maka ọdịnala ọdịnala anyị ga-arụ ọrụ dịka nke e buru n'amụma mgbe mmụba ahụ jikọtara ụkpụrụ agbakọtara.
DEMAGNETIZATION CURVE ESLỌ
Akpaka mmesho nke demagnetization usoro nke na-adịgide adịgide magnetik ihe ndị dị otú ahụ dị ka ferrite, AlNiCo, NdFeB, SmCo, wdg. Ziri ezi mmesho nke magnetik e ji mara parameters nke remanence Br, coercive ike HcB, intrinsic coercive ike HcJ na kacha magnetik ike ngwaahịa (BH) max .
Nabata usoro ATS, ndị ọrụ nwere ike hazie nhazi dị iche iche dị ka achọrọ: Dị ka akụkụ na nha nke tụrụ atụ iji kpebie nha electromagnetic na nnwale nnwale elebara anya; Họrọ eriri igwe dị iche iche na nyocha dịka nhọrọ nke usoro ntụgharị. Kpebie ma ị na-ahọrọ ihe ndozi dịka ụdị nlele.
AKW LKWỌ ND L KWESIFER L KWES (R ((ỌT))
Akụkụ ndị bụ isi nke magnet neodymium magnet na-abawanye nguzogide nke oxidation & corrosion ma na-ebelata ọnwụ ọnwụ na ule na iji. USA Standard: PCT na 121ºC ± 1ºC, 95% iru mmiri, 2 ikuku ikuku maka awa 96, ọnwụ ọnwụ <5- 10mg / cm2 Europe Standard: PCT na 130 ºC ± 2ºC, 95% iru mmiri, 3 ikuku mgbali maka 168 awa, arọ ọnwụ <2-5mg / cm2.
Nkọwa okwu a bụ "HAST" na-anọchi anya "Nnwale Ọnọdụ Nsogbu Mgbanwe Ọdachi / Iju Mmiri." Aha a na-akpọ “THB” na-anọchi anya “Okpomọkụ iru mmiri Bias.” Nyocha THB na-ewe 1000 awa iji wuchaa, ebe nyocha ỌZỌ dị dị n'ime oge 96-100. Oge ụfọdụ, nsonaazụ dị na ọbụlagodi awa 96. N'ihi oge ịchekwa uru, ewu ewu nke HAST arịwanye elu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọtụtụ ụlọ ọrụ ejirila HAST Chambers dochie THB Test Chambers.
AKW ELKWỌ ELECTRON MICROSCOPE
Igwe nyocha elektrọn (SEM) bụ ụdị microscope elektrọn nke na-ewepụta onyonyo nke ihe nlele site na iji nyocha elebara elektrọnị nyocha ya. Ndị electrons na-arụ ọrụ na atọm na ihe nlele ahụ, na-emepụta akara dị iche iche nwere ozi gbasara ọdịdị ala na ihe mejupụtara.
Ọnọdụ SEM kachasị dịkarị bụ nchọpụta nke elektrọn nke abụọ na-ebute site na atọm nke obi ụtọ electron na-atọ ụtọ. Onu ogugu nke electrons nke abuo nke achoputara na-adabere na ihe ndi ozo na onodu ihe nlere. Site na i theomi ihe nlele na ichikota electrons nke abuo nke a na-emeputa site na iji ihe nchoputa puru iche, a na-eme onyonyo na-egosipụta ọdịdị ala nke elu.
Mkpuchi ọkpụrụkpụ nchọpụta
Ux-720-XRF bu ihe nkpuchi nkpuchi nke ihe mkpuchi X-ray nke di elu nke nwere ihe nlebara anya nke polycapillary X-ray na ihe nyocha. Nchọpụta nchọpụta X-ray dị mma na-eme ka mmụba dị elu na oke nkenke. Ọzọkwa, imepụta ọhụụ iji nweta oghere sara mbara gburugburu ọnọdụ nlele na-enye ọmarịcha operability.
Igwefoto nlele nlele dị elu dị elu na mbugharị dijitalụ zuru ezu na-enye onyinyo doro anya nke ihe nlele ahụ nwere ọtụtụ iri puku micrometers na dayameta na ọnọdụ nchọpụta achọrọ. Igwe ọkụ maka nlele nlele jiri ikanam nke nwere ogologo ndụ.
UTESTTESTA NTPRRAL UGBUA
Na-ezo aka na elu nke igwe ihe iji chọpụta nkwụsị nke ihe nnwale gburugburu ebe obibi na-eji nyocha ịgba nnu emepụtara site na ọnọdụ gburugburu ebe obibi. Na-ejikarị ihe ngwọta 5% nke sodium chloride nnu eme ihe na-anọghị na-agbanwe agbanwe (6-7) dịka ihe ngwọta. Ejiri 35 Celsius C.Edepụta ihe mkpuchi ngwaahịa na-ewe oge iji gụọ.
Nnwale ihe nyocha nnu na-eme ka nnwale corrosion na-emepụta nke na-eme ka mbuso agha na-emetụta ihe atụ dị iche iche iji tụlee (nke kachasị na ya) nke kwesịrị ekwesị nke mkpuchi ahụ maka iji chebe. A na-enyocha ọdịdị nke ngwaahịa corrosion (nchara ma ọ bụ oxides ndị ọzọ) mgbe oge a kara aka. Oge ule na-adabere na nkwụsị nke corrosion nke mkpuchi ahụ.